Xukuumadda Somaliya ayaa meesha ka saartay in wax rayid ahi lagu dilay duqayntii maanta ka dhacday nawaaxiga Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose.
Wasaaradda Warfaafinta Somaliya ayaa war ay saqdii dhexe ee caawa soo saartay waxaa lagu sheegay in laba weerar oo ka dhacay agagaarka deegaanka Dab Shiniile iyo Degmada Jamaame lagu dilay saddex ka mida maleeshiyada Al Shabaab.
Sidoo kale warka ayaa lagu sheegay in Dowladda Somaliya iyo Taliska AFRICOM ay qaadaan tallaabooyin waaweyn oo looga hortaggo waxyeelada rayidka, si ka duwan baa warka lagu yiri weerarada aan kala sooca lahayn ay Shabaabku sida joogtada ahi ugu gaystaan dadka rayidka ah.
Barraha Internet-yada ee afka Shabaabka ku hadla ayaa baahiyay in duqaynta lagu dilay mid ka mida Salaadiinta beelaha, kaasoo ay magaciisa ku sheegeen Suldaan Maxamed Cabaas.
Taliska AFRICOM ayaa sanadkan bilowga ah dardar ku wada weerarada dhinaca cirka, ee ay ka gaysanayaan dhulka ay maamusho Al Shabaab.